Mapuratifomu Ako Ekushambadzira Haasi Akarurama Sezvaunofunga | Martech Zone
Mapuratifomu Ako Ekushambadzira Haasi Akarurama Sezvaunofunga
Vanhu vazhinji havazive kutadza kwe analytics uye kushambadzira mapuratifomu mukuyera siyana vashanyi. Mazhinji emapuratifomu aya anoyera mushanyi nekuisa kudzayi, faira diki rinotumirwa nguva yega yega mushanyi paanodzoka saiti achishandisa browser rimwe chete. Dambudziko nderekuti ini ndinogona kusadzokorora saiti yako kubva kune imwechete browser ... kana ini ndinogona kudzima makuki angu.
Kana ndikashanyira saiti yako parunhare mbozha, piritsi, laptop nedesktop… ini ndangova vashanyi vana vakasarudzika. Kana ndikabvisa makuki angu kakati wandei ndikadzokera kune yako saiti, ini ndakazongova vashanyi vakasarudzika. MediaMind inoshandisa nzira inonzi yakashandurwa yakasarudzika mushanyi uye vanoitsanangura muvhidhiyo ino - vachishandisa yavo yekugadzirisa algorithm kune vateereri vako stats. Ivo vanotsanangura iko pamusoro-kutaurwa kweakasarudzika vashanyi pano:
Dambudziko harisi rekungori neako analytics, zvakadaro. Iyo inokanganisa zvakanyanya epamhepo epamhepo kushambadzira mapuratifomu ayo anoteedzera maitiro emushanyi uye huwandu hwevanhu nekufamba kwenguva. comScore inofanotaura kubviswa kwecookie senge hombe nyaya. Kubva paComScore, kunongedza kwakaringana uchishandisa makuki (% ekuratidzira akaunzwa nenzira kwayo):
70% ye1 demo (semuenzaniso vakadzi)
48% yemademo maviri (semuenzaniso vakadzi vane makore 2-18)
11% yemademo matatu (semuenzaniso vakadzi vane makore 3-18 nevana)
36% yehunhu hwekutarisa
Izvi hazvirevi kushora yako analytics kana yako yekushambadzira otomatiki chikuva. Rinongova izwi renyevero mukuvimba kwako nenzira dzekuzivisa seichi. Kune vashambadziri, apa ndipo panowanikwa mapuratifomu ane wechitatu-bato logins uye kusanganisa zvinogona kunyatso tarisa vashanyi vako pamasvikiro nezvirongwa. Kana iwe uchida kuti mushanyi wako apinde pawebhu, pane yako nharembozha, kana chero chimwe chinongedzo - unogona kunongedza zvirinani vashanyi uye nekunyatso kugadzirisa huwandu hwechokwadi siyana Vashanyi.
Kufambisa ruzivo kwakanyanya kukosha sezvo iwe uchishandisa aya metric. Marita yekukanganisa pamasvikiro haigone kuchinja zvakanyanya - saka nekufamba kwenguva kana yako yakasarudzika mushanyi kuverenga ari kukwira kumusoro, saka uri kuita chaicho chinhu. Kana vasiri, iwe unogona kunge uine rimwe basa rekuita.
Tags: yakagadziriswa yakasarudzika mushanyicomscoremediamindVakasarudzika Vashanyimushanyi kuteedzeravashanyi
Gumiguru 23, 2013 pa 9:49 AM
Ndatenda nekugovera Doug! Iko kuverenga kwakanaka uye kwakaita kuti ndifunge! ..
Jan 4, 2014 pa 5: 19 AM
nyfv Munguva ichangopfuura ndanga ndave pasi pemari nezvikwereti zvaindidya kubva kumativi ose. that was UNTIL ndadzidza kugadzira mari.. paINTERNET. Ndakashanyira Surveymoneymaker point net, ndikatanga kuzadza ongororo dzemari, uye chaizvo, ndave nekukwanisa kutenderera nemari !! ndinofara kuti ndaita izvi.. mKBu